Global Voices teny Malagasy » Sina: Mpianatra Miofana Arak’asa Sa Mpikarama Vary Masaka? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Oktobra 2011 7:00 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fanabeazana, Sendikà, Tanora, Toekarena sy Fandraharahàna, Zon'olombelona
Hatramin'ny 2004 no nanomboka tsikaritra tao China ny tsy fahampian'ny hery afaka mamokatra; mba hiatrehana ilay olana dia nanomboka nandrisika ny fanorenana ivontoerana tantanin'olon-tsotra ny governemanta Sinoa mba hampitomboana ny isan'ireo sekoly manofana hiasa. Araka ny antontan'isan'ny Biraon'ny Fanabeazana, ny isan'ny mpianatra any amin'ireo Lisea manofana hiasa dia niainga avy amin'ny 12,56 tapitrisa tamin'ny 2003 ka tonga amin'ny 21,95 tapitrisa tamin'ny 2009.
Tamin'ny 2006, nampidirin'ny governemanta ny atao hoe “Orinasa etsy aloha, sekoly ao an-damosina” na lasitra fiaraha-miasan'ny sekoly sy ny orinasa. Na izany aza, ireo mpianatra miditra amin'izany dia tsy voaaron'ny karama farany ambany akory, sady ireo orinasa dia tsy mila akory mandrotsaka fiahiana ara-tsosilay ho azy ireny, na dia miasa toy ny mpiasa tsotra rehetra aza ireo mpianatra.
Herim-pamokarana sady mpianatra
Tanora miasa aminà orinasa mpanamboatra kiraro ao Shenzhen Longgang, Sina. Sary avy amin'i Martin Coyne, copyright Demotix (27/04/2009).
Ny Asia Monitor Resource Centre na Foibe Fanaraha-maso ny Loharanon'angovo ao Azia dia namoaka tatitra amin'ny antsipirihany, ‘ Cheap Labour in Essence, Students in Name: Vocational School Interns In China  [Eng]’, momba ny fanararaotana an-kitsirano ny mpianatra mianatra asa ao Sina
…ny hany tena ilain'ireo orinasa Sinoa rehetra dia mpiasa tsy manana fahaizana manokana; ; ny ankabeazan'ny mpianatr’ ireo lisea manofana hiasa, na inona na inona làlam-piofanana arahan-dry zareo, dia alefa any amin'ny seha-pamokarana daholo amin'ny farany, ka any dia lazain'ireo mpianatra sasany fa iray andro monja no lanin-dry zareo ianarany ny asany no sady tsy ilàna fahaizana manokana momba ilay asa akory. Vokatr'izay, ny fandraisana ireo mpiasa mianatra asa, ny tena votoatiny, dia fanilihana fotsiny ireo mpianatra tsy ho isan'ny mpiasa manana fifamatorana matotra amin'ny orinasa, ary dia tsy voaaron'ny lalàna mifehy ny asa ry zareo amin'izany, ka dia azon'ny orinasa atao ny mampidina ny fandaniana natokany ho an'ny herim-pamokarany.
Io zava-misy io dia tsy hoe fotsiny manakana ireo mpianatra tsy hahazo ny zony amin'ny maha-mpiasa azy, fa koa mitondra voka-dratsy ho an'ireo rehetra tonga eo amin'ny tsenan'ny asa. Orinasa maro no mampiasa mpianatra mandritra ny fotoana maharitra, ny sasany amin'izy ireny no mampiasa azy ireny hatramin'ny 70%-n'ny herim-pamokarana ilain-dry zareo…
Mpianatra-mpiasa maro avy ao amin'ny Sekoly Miaramilan'ny Guoyang na ny Sekoly Fianarana Asa ao Guoyang no nanapa-kevitra hamaky bantsilana ny olana teto amin'ny aterineto. Ito ambany ito ny fampidirana nataon-dry zareo tao amin'ny Sina Weiblog  [zh] tamin'ny 19 Jolay 2011:
Mpianatra nahazo diplaoma tao amin'ny Sekoly Miaramila ao Guoyang izahay. Ampiasain'ny sekoly ho toy ny fitaovana hakàna tombontsoa fotsiny izahay. Mahatsiaro sorena izahay ary manapa-kevitra ny hiaro ny zonay sy hikatsaka ny rariny. Te-hizara izay zavatra iainanay izahay, miangavy mba tohano! Ny rohy mankany amin'ny bilaoginay dia : http://t.cn/aWSbkR
Ny iray amin'ireo mpianatra-mpiasa, Xiao Luo, dia nilaza ity tantarany ity tao amin'ny gazety iray ao an-toerana [zh] tamin'ny Jolay:
“Tsy afaka hahazo na inona na inona ianao any an-tsekoly.” Ny ‘marketing’ no taranja ataon'i Xiao Luo. Niditra tao amin'ny sekoly izy tamin'ny Jolay 2007, nijanona tao nandritra ny dimy andro dia avy eo nalefa tany aminà orinasa iray ao Shenzhen ho toy ny mpiana-draharaha. Niasa tao izy hatramin'ny Febroary 2008, avy eo niverina an-tsekoly hianatra momba ny asa nandritra ny roa na telo volana teo ho eo dia naverina niasa indray. “Tsy nisy fitarihan-dàlana na kely aza tany amin'ny toeram-piasana, fa tonga dia mpiasa fotsiny izao izahay, raha ny marina.” Hoy i Xiao Luo, “Isak'izay tafaverina avy any amin'ny asa izahay, dia omen'ny sekoly herinandro hialàna sasatra, nomena izao karazan'antontan-taratasy rehetra izao ho fampahafantarana ny sekoly ary nangatahana mba handroboka mpianatra maro rehefa tafody any an-tanàna. Raha tsy mahavita misarika mpianatra misimisy izahay, dia mandoa lamandy ny mpampianatra anay. Etsy ankilany kosa, mandray 600 [yuan] bonus isaky ny mpianatra voajono izahay. Ny marina dia izao, tsy ny sekoly no mandoa ny vola, fa esorina amin'ny karamanay.”
Araka ny fitsipika mipetraka, ny karaman'ireo mpianatra asa dia tokony haloa mivntana amin'izy ireo, na izany aza anefa, tato anatin'ny roa na telo taona farany, dia nalefa mivantana tany amin'ny kaontin'ny sekoly ny karama… Fanampin'izany, nametraka fangatahana fanampiana avy amin'ny governemanta ny sekoly ho an'ireo mpianatra ka ny mpianatra tsirairay dia tokony handray 3.000 yuan mandritra ny roa taona. Nisy mpianatra 1.801 tao amin'ny andiany misy an'i Xiao Luo, saingy tsy nisy na iray aza tamin-dry zareo naharay ilay fanampiana avy amin'ny governemanta.
Nampiasa ny Weibo ihany koa ilay mpianatra mba hanairana ireo mpiasan'ny mpampahalala vaovao ao an-toerana  [zh] mikasika ny momba azy ireo:
Ho an'i @ChinaNewsWeekly: Miarahaba, mpianatra avy ao amin'ny Lisea Fianarana asa ao Guoyang izahay. Nanitsakitsaka fepetra maro ny sekoly, isan'izany ny saram-pianarana midangana, ny fampanaovana fiofanana arak'asa maharitra loatra any anivon'ny orinasa, fampiasana mpianatra tsy ampy taona, fanagiazana ny karaman'ny ankizy sy ny fanampiana avy amin'ny governemanta. Nametraka fitarainana izahay tany amin'ny Birao momba ny Fanabeazana sy ny Sanda. Saingy ny fihetsika asehon'ny Birao misahana ny Fanabeazana dia sadasada toa mitanila ka nanomboka nandrahona ny mpianatra ny sekoly ankehitriny. Manana porofo izahay ary azonay alefa ho anareo izany. Misaotra anareo!
Farany, maro ireo famoaham-baovao eo anivon'ny aterineto no nanaraka akaiky ilay raharaha, toy ny Caixin.cn  [zh]. Avy eo ireo mpianatra dia namelabelatra misimisy kokoa, tamin'ny 26 Aogositra [zh] tamin'ny alalan'ny kaonty Weibo an-dry zareo, fa ny sekoly dia mandefa ny ankizy ho herim-pamokarana hiasa any aminà orinasa mpanao akanjo.
Avy ao amin'io sekoly io aho. Tamin'ny 2007 aho no niditra tao fony mbola 15 taona. Toy ireo mpiasa hafa rehetra, ny anjarako dia ora 12 isan'andro ary fitsaharana in-droa isam-bolana ihany. Tamin'izany fotoana, nisy loza nitranga tao amin'ny toeram-ponenan'ireo mpiasa ao amin'ilay orinasa ary nahakasika ankizy iray niasa tao ka dia naverin'ny orinasa nankany an-tsekoly daholo ireo ankizy rehetra nampiasaina tao. Avy eo novàn'ny sekoly ny datin'andro nahaterahanay tany anaty antontan-taratasy ary dia nalefany hiasa tany aminà orinasa iray hafa izahay. Nisy teo amin'ny 100 teo ny mpianatra latsaky ny 16 taona, ny sasany vao 14 taona monja!
Ny 8 Septambra, roa andro nialoha ny Andron'ny Mpampianatra, namoaka lahatsary iray ireo mpianatra, manainga ny mpanabe an-dry zareo hihetsika handray andraikitra mikasika ny fanararaotana ny mpianatra miasa:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/10/06/23322/
 Cheap Labour in Essence, Students in Name: Vocational School Interns In China: http://www.amrc.org.hk/node/1179
 fampidirana nataon-dry zareo tao amin'ny Sina Weiblog: http://weibo.com/2253240541/xfvntrdEa
 nilaza ity tantarany ity tao amin'ny gazety iray ao an-toerana: http://blog.sina.com.cn/s/blog_864db8dd01010gex.html
 hanairana ireo mpiasan'ny mpampahalala vaovao ao an-toerana: http://weibo.com/2253240541/xh9IQwSAw
 namelabelatra misimisy kokoa, tamin'ny 26 Aogositra: http://weibo.com/2253240541/xlhdMpOTh